Warshada Xalka Ilkaha | Shiinaha Soo-saareyaasha Ilkaha Soo-saareyaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha
Design Naqshadeynta barkin-hawleedka oo la waafajiyay fadhiga ergonomic iyo jiifka jiifka, kaas oo ku habboon daaweynta muddada-dheer.
C Barkinta kursiga waxaa loogu talagalay qaab kala qeybsan, nasashada cagtana waxaa sameeya xumbada adag ee PU, taas oo xirata adkaysi u leh dhibna aan lahayn. Kursiga ugu hooseeya ee kursigu waa 380mm, kaas oo ku habboon bukaan socodka inay kor iyo hoos u kacaan.
Grade Barkinta maqaarka oo jilicsan oo heer sare ah oo leh taageero lumbar iyo naqshadaynta madaxa ayaa leh dareemo xoog leh.
Design Nashqadda gadaal u eg ee miisaanka loo yaqaan 'Peach-shaped peach design' waxay sare u qaadeysaa booska lugta dhakhaatiirta waxayna hubineysaa in marinka ugu dhow ee dhakhtarka iyo bukaanku u dhow yahay.
XH605 Qaybta Ilkaha
Unugga ilkaha lagu rakibo waa aalad daweynta ilkaha oo si gaar ah loogu talagalay qalliinka maqaar-galaha. Waxay la kulmi kartaa shuruudaha gaarka ah ee nalalka qalliinka ilkaha, nuugista iyo wixii la mid ah.
XH502 Qaybta Ilkaha
Qeybta Ilkaha ee Grace-D XH502 waxaa loo sameeyay iyadoo lagu saleynayo mowduuca "Ku raaxeyso daaweynta" SHINVA. Kumbiyuutarka kumbuyuutarka si otomaatig ah u shaqeeya iyo muuqaalka firfircoonaanta waqtiga xaadirka ah ee LCD wuxuu hawlgalka dhakhtarka ka dhigayaa mid ku habboon oo caqli badan. Naqshadda ergonomiga waxay bukaanku ka dhigeysaa mid deggan oo yareynaya xiisadda iyo xanuunka daaweynta. Waxqabadka wanaagsan ee wanaagsan waxay ka caawisaa bukaanada inay ku raaxaystaan ​​daaweynta.
XH501 Qaybta Ilkaha
Qeybta Ilkaha ee Grace-D XH501 waxaa lagu soo saaray iyada oo ku saleysan mawduuca "daaweyn raaxo leh" oo ay bixisay SHINVA. Naqshadeynta waxay tixgelineysaa raaxada iyo habboonaanta booqashada bukaanka iyo qalliinka dhakhtarka. Xulashada qalabka wanaagsan, naqshadeynta ergonomiga, microcomputer xakamaynta otomaatiga ah iyo habka wax soo saarka caaryada ayaa ka dhigaysa waxqabad lagu kalsoonaan karo, hawlgal habboon iyo muuqaal qurux badan.
Smart Automatic Dhaqe-jeermiska
Smart Series makiinada-jeermiska-disha jeermiska jirka waxaa badanaa loo isticmaalaa dhaqida, jeermiska iyo qalajinta qalabka (oo ay ku jiraan qalabka gacmaha ee ilkaha), weelka dhalooyinka iyo weelka balaastigga ee isbitaalka CSSD ama qolka qalliinka.
Saamaynta maydhista iyo jeermiska ayaa u hoggaansamaysa heerka caalamiga ah ee EN ISO 15883.
BADBANAYAASHA Steerizer-Fasalka B
BADBAASIMADA Uumi-Bixiyaha: T18 / 24/45/80 waa nadiifiye miisaska 'Class B' yaala. Sida nooc ka mid ah jeermiska sterilizer ee sareeya, waxay u qaadataa uumi ahaan sida dhexdhexaadkeeda oo ah mid dhaqso leh oo dhaqaalo leh.Waxay caan ku yihiin waaxda ilkaha, waaxda indhaha, qolka qalliinka iyo CSSD si looga dhigo jeermiska looga dhigo qalab qalalan ama aan la furin, dhar, weelal , dhexdhexaad dhexdhexaad ah, dareere aan daboolnayn iwm.
Bacriminta Steam BADAN
BADAN Steer Sterilizer: T60 / 80 oo ah nooc ka mid ah jeermiska sterilizer ee cadaadiska sarreeya, waxay u qaadataa uumi iyada oo ah dhexdhexaadkeeda jeermiska ka dhigta taas oo ah mid si dhakhso leh u ammaan iyo dhaqaale leh, hawlgal firfircoon. Nidaamka wax ku oolka ah ee laba-laba-laabka leh iyo uumi-baxa tamarta badan ee tamarta uumi baxa ayaa ka dheereeya MOST-T jeermiska taxanaha caadiga ah ee xawaaraha bambooyin iyo jiilka uumiga. Waxay caan ku yihiin waaxda caloosha, waaxda indhaha, qolka qalliinka iyo CSSD si looga dhigo jeermis-nadiifinta dharka aaladda la duubay ama la duudduubay, maacuunta, qalabka dhaqanka, dareeraha aan la shaacin iwm.
Dmax-N Cajalad Sterilizer Dijital ah
Dijital Cajaladda Sterilizer waa qalab si dhakhso ah otomaatig u ah jeermis-dilis u adeegsata uumiga cadaadiska dhexdhexaad ahaan. Ku habboon nadiifinta qalabka caafimaadka ee u adkeysan kara cadaadiska uumiga, sida qalabka ilkaha, qalabka saxda ah ee indhaha, qalabka ilkaha ee adag iyo qalabka qalliinka, iwm.